Mustaqbalka cabsida ee wicitaanada tooska ah: lambarrada iyo codka aad taqaanid - TELES RELAY
ACCUEIL » COMPANY Mustaqbalka cabsida ee wicitaanada tooska ah: lambarrada iyo codadka aad taqaanid
Mustaqbalka cabsida ee wicitaanada tooska ah: lambarrada iyo codadka aad taqaanid
Laakiin ma aha kaliya wicitaan kasta. Waa adiga.
Tani waxay dhacdey fiidnimadii Arbacadii dhoweyd markii aqoonsiga wicitaanka ee iPhone aan ku muujiyay lambarkeyga iyo sawirka wajiga. Waxay ahayd wicitaan toos ah iyada oo la adeegsanayo farsamooyinka tuugada aqoonsiga si ay uga dhigaan inay ka soo wacaan lambarkayga.
Tani waxay ahayd fariin horay loo diiwaangeliyey oo ka timid "Microsoft" oo sheeganaya in liisanka kombuyuutarkayga uu dhacay. Ogaanshaha layliga, lama yaabin inaan ogaado saacadaha 24 ka tagay inay ka jawaabaan intaan xabsi tagin.
Waxaan helaa wicitaano been abuur ah marka loo fiiriyo wicitaanada - ka dib dhammaantood, ku dhawaad 30% dhammaan wicitaanada maalin walba waa wicitaano is-garsi ah - laakiin wicitaankii lambarkayga ayaa ahaa mid cusub.
Hase yeeshee, sida laga soo xigtay khubarada qaarkood, tani waxay kaliya u tahay mid ka mid ah khataraha waaweyn ee khatarta ah: Dunida aad ku hesho wicitaanada tooska ah ee tirooyinka aad ogtahay iyo halka qofka kale uu u eg yahay sida qof aad taqaan.
Spoofing, qaab codsi habaysan, ayaa noqonaya mid caadi ah. Tani waa marka qof uu ka soo wacayo adeegga VoIP, sida Skype, oo wuxuu gali karaa lambarka martida. Inkastoo adeegsaduhu waa inuu bixiyaa lambar marka wicitaan laga sameeyo telefoonka gacanta ama telefoonka gacanta, wixii isbarbar socda ee lambarrada waxaa lagu geli karaa adeegga VoIP, haddii uu yahay lambar la garaacay, lambar ka mid ah buugga cinwaankaaga ama Aqalka Cad. . Way fududahay in qof kastaa uu qaban karo.
Sababtoo ah feejignaantu waa ogyahay in aad u badan tahay inaad ka jawaabto haddii aad aqoonsatid qofka soo wacaya, waxaa suurtogal ah inuu galo lambar uu u malaynayo inuu ku jiro buugga cinwaankaaga. Waxay xitaa hal maalin isticmaali karaan tiknoolajiyadda codka ee codka si ay ula qabsadaan qofkaas. (fikir qoto dheer loogu talagalay wicitaanada toosan.)
Tarun Wadhwa, oo ah aasaasaha shirkad tiknoolaji ah oo ku takhasustay Day One Insights, ayaa sheegay in ay fududahay qof aan garanaynin in uu ogaado cidda kuugu dhow iyo waxa xogtooda shakhsi ahaaneed. warbaahinta ama bogag kale. Sanado badan oo jebin-tirinta xogta ballaaran ayaa internetka ku ridey lambarrada taleefannada, cinwaanada, passwords iyo macluumaadka kaararka deynta ee malaayiin qof, taas oo fududaynaysa in ay galaan nidaam.
"Waxa ay eegi doonaa sida Photoshop - wax sidaas u fudud, baahsan oo si fiican u yaqaan in aan joojin si ay u fahmaan sida loo isticmaalay dadka iyo waxa aanu na ma yaab," ayuu yiri Wadhwa, kuwaas oo ku qaatay sano baranayay arimaha la xidhiidha aqoonsiga, teknooloojiyada been abuurka ah iyo nabadgelyada internetka.
Wadhwa wuxuu ka baqayaa in tiknoolajiyada noocaas ah ay sidoo kale burburin karto cilaaqaadka iyo sumcadda.
"Waxaan si fudud u qiyaasi kartaa xaaladaha noocaan ah farsamooyinka hadalka waxaa loo isticmaalaa in la isku qaldo, baad ah dadka ka dhigi khiyaamo iyo fiisa ama ka badan ayaa sax ah," ayuu yiri.
Qaar ka mid ah bilowga horey uga shaqaynayeen tiknoolajiyada codaynta codka. Kuwa kale ayaa isticmaala AI si loo abuuro codad awood u leh inuu ku dheelo sida aadanaha dhabta ah.
Sannadkii hore, Google ayaa soo bandhigay kaaliyihiisa Duplex oo leh sir macquul ah oo muujiyey sida qofku u samayn karo casho celinta taleefanka iyada oo aan ogeyn in soo-dhaweeyuhu uusan ahayn qof. Tiknoolajiyadda, oo u muuqatay mid macquul ah oo ay la hadli karto qofkii soo wacay, sameeyey dareen ah . Dhaleeceyntu waxay ka welwelsan tahay sida ay u adag tahay qofka caadiga ah inuu kala saaro cidda dhabta ah ee aan telefoonka ku jirin, ka dhigaysa laynka u dhexeeya wada sheekaysiga tooska ah iyo kan saxda ah.
Laakiin Alex Quilici, oo ah Agaasimaha Telefoon ka hortaga telefoonka ee RobMall, ayaa sheegay in ay qaadan doonto hawlo badan oo ku saabsan dhammaadka scammer ee in taasi dhacdo.
"Dhisidda codka kombiyuutarka been abuurka ah hadda waa shaqo quman," ayuu yiri Quilici. "Haddii aan rabo inaan dhiso mid ka mid ah sida adiga oo kale, tusaale ahaan, waxaan u baahnahay tone oo ah shaybaakyo gaar ah, oo samee tusaala kombuyuutar ah taas."
Waxa uu sheegay in ay fududahay, laakiin wali waa mid casri ah. , qashin-qaadiddu waxay ku lug yeelanaysaa helitaanka lambarka taleefanka ee saaxiibka ah oo sheegaya in uu ku jiro xabsi oo waa inaad u dallacdaa. Ama, waxay macnaheedu noqon kartaa in lambarka cunugaaga loo diro qof ka codsanaya inuu noqdo dhakhtarka, oo kaa codsanaya inaad tagto isbitaalka - oo kaliya in la jabiyo markaad baxayso.
Walaacyadaasi waxay yimaadaan wakhti ah marka wicitaanada tooska ah ay ka badan yihiin abid iyo meesha dad yar waxaad ka heleysaa wicitaanada lambarada aan la garanayn Maraykan ah heleen 26,3 billion calls iswada sanadkii la soo dhaafay, koror of 46% ka badan 2017, iyo March Record cusub u dhigay bil kasta la 5,23 billion calls iswada, sida lagu sheegay xog ka YouMail. Isla mar ahaantaana, Guddiga Isgaarsiinta Federaalka ayaa sheegay in wicitaanada aan la rabin ilaa cabashada ugu weyn ee macaamilka adoo u sheegaya wakaaladda sanad walba. (Wuxuu 7,1 malaayiin cabasho ah ku siiyay wicitaanada tooska ah ee 2017).
Guud ahaan, kama jawaabi doono wicitaanada lambarrada aan la garanayn, laakiin aniga aniga way igu adag tahay inaan iska caabbiyo. Sida laga soo xigtay Quilici, si fudud u qaadashada taleefanku wuxuu noqon karaa qalad. Jawaabida wicitaan toos ah ayaa u ogolaanaya khiyaamo inay ogaadaan in lambarkeygu yahay mid firfircoon oo aan diyaar u ahay inaan qaato.
"Xadida aqoonsiga waxay noqotaa mid aad u badan sida kuwa been-abuurka ah ay isku dayaan in ay wacaan lambarrada ay u badan tahay in la xakameeyo," ayuu yiri. "Kama horjoogsaneysid lambarkaaga, waxaadna u badan tahay inaad ka jawaabto lambarrada u muuqda degaanka."
Dadaallada FCC ee kufsiga wicitaanada tooska ah ayaa ahaa mid gaabis ah. Bishii Nofeembar 2018, Guddoomiyaha FCC Ajit Pai diray waraaqo gaadiidleyda, oo ay ku jiraan Verizon, AT & T iyo T-Mobile, si ay ugu dhiirigeliyaan inay qaataan nidaam aqoonsi oo loogu talagalay dadka soo wacaya.
"Muhiimadda ugu weyn ee macaamiisha waa dagaalka lagaga soo horjeedo wicitaanada sharci darrada ah. si ay u xaqiijiso FCC, "ayuu yiri Pai . "Taasi waa sababta loo yaqaan aqoonsiga waa in uu noqdo mid dhab ah. Tani waa habka ugu wanaagsan ee loo hubiyo in macaamiisha si kalsooni leh uga jawaabi karaan taleefankooda. Sanadka soo socda, waxaan rajeynayaa in macaamiishu ay bilaabi doonaan inay arkaan taleefankooda. "
Warshadaha isgaarsiinta ayaa ka shaqaynaya qalab la yiraahdo "Stir / Shaken" si loo garto oo loo ilaaliyo dadaalka sir-doonka ah ee laga yaabo inuu leeyahay awoodda ugu wayn ee lagu xakamaynayo wicitaanada toosan. AT & T, Comcast iyo Verizon horeba waxay sameeyeen imtixaanno iyo bixiyeyaasha kale waxay ku go'doomeen inay qaataan Stir / Ruxin dhammaadka 2019. (AT & T ayaa leh shirkad waalid oo CNN, WarnerMedia.)
gudbinta - qof isticmaalaya telefoonka xarkaha AT & T wuxuu u baahan yahay in la xaqiijiyo marka uu wacayo taleefanka rasmiga ee Comcast - waa farsamo weyn oo farsamo. Khubarada qaarkood, sida Wadhwa, waxay ka baqayaan in xalalku uu wax yar ka baxo markii ay soo galaan suuqa.
Dhanka kale, robotyada xannibaadda codsiyada sida YouMail ayaa laga yaabaa inay faafiyaan farriinta adeegga marka la helo lambarka robo ee la yaqaan. Fariinta ayaa ku siinaysa aragti ah in lambarkaaga la tirtiro, markaa khaa'imiinta ma soo wici doonaan. Dhanka kale, macalimiinta sida Verizon, AT & T iyo T-Mobile ayaa soo jeediyay codsiyada bilaashka ah si aad u soo in si toos ah looga joojiyo wicitaanada noocan ah. Qiimaha bil kasta ee dhowr ah oo doolar ah, barnaamijyadahaan ayaa ka beddeli kara raadinta qofka soo wacaya.
scammers been abuur ah ku tiirsan yihiin technology cheap shaqeeya on qiyaasta weyn, laakiin nidaamka cusub ayaa noqon kara xariifnimo iyo halis ah xitaa weyn ee mustaqbalka.  "Haddii aan ku guuldareysato inay xaliyaan arrintan, waxaan qabaa inaan ka fiirsan doonaan calls iswada dhibaato sahlan si ay u xalliyaan badan waxa lagu bixiyaa dhuumaha," ayuu yiri Wadhwa.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.cnn.com/2019/04/06/tech/robocalls-scam-voice/index.html
Cameroon: Maurice Kamto iyo dadka kasoo horjeeda ee lagu xiray dhinaciisa waxay qabteen UN - JeuneAfrique.com
Rwanda-France: shan iyo labaatan sano oo lagu xusay xasaradda sare - JeuneAfrique.com